ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်နည်းပညာဆိုင်ရာပြIssueနာမဟုတ်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုပြIssueနာဖြစ်သည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 16, 2018 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ကျွန်ုပ်၏အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ၄ င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ထံမှအထက်မှအောက်သို့တွန်းပို့ခြင်းဟုယူဆကြသော်လည်းကုမ္ပဏီ၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုကိုတွန်းအားပေးရန်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းကိုသင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏခေါင်းဆောင်မှုမှငှားရမ်းခြင်းခံရသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရာတွင်အထောက်အကူပြုရန်ငှားရမ်းခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်သောရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာသိရှိနိုင်နိုင်သောကြောင့်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများမှစတင်သည်။
ရိုးရာရုပ်သံလိုင်းများတွင်ကျဆင်းနေမှုများဆက်လက်ရှိနေပြီးတတ်နိုင်သည့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီများသည်အပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ဦး တည်ချက်ချို့တဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အစဉ်အလာအတွေးအခေါ်များနှင့်အမွေစနစ်များကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်နဲ့တင်ပြနိူင်တယ် စျေးကွက်ရင့်ကျက်မှု သူတို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း, သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အကြားနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်လေးစားမှုနှင့်အတူ။ ထိုအထောက်အထားများကကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူပြီးသည်နှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲရန်ခရီးထွက်သွားကြသည်။
၀ န်ထမ်းများသည်လေ့လာသင်ယူရန်နှင့်အားသွင်းရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲတအံ့တသြအံ့သြမိပါသည်။ သူတို့နားလည်သဘောပေါက်ရင်တောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် သွက်လက် သူတို့ကအပြောင်းအလဲကိုကြောက်တဲ့အတွက်ပြန်တွန်းကြတယ်။
ထိုအဆိုအရ Nintex မှနောက်ဆုံးလေ့လာမှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းသည်နည်းပညာပြissueနာမဟုတ်ပါ။ ငါကဲ့သို့သောအတိုင်ပင်ခံများသည်ယခုအချိန်တွင် ၀ ယ်လိုအားအလွန်များနေသည်။ ကုမ္ပဏီများတွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောစွမ်းရည်ရှိသော်လည်း၎င်းစွမ်းရည်သည်နည်းလမ်းသစ်များ၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ static ဖြစ်စဉ်များသည်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာများနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်မကြာခဏအခြေချတတ်သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောအရာအားနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
သာ စီးပွားရေး ၀ န်ထမ်းလိုင်း၏ ၄၇% ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတောင်သတိထားမိကြပါတယ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းဖြေရှင်းရန် / အောင်မြင်ရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။
မန်နေဂျာ၏ 67% မန်နေဂျာမဟုတ်သူများ၏ ၂၇% နှင့်သာနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုအဘယ်သို့သိသနည်း။
သော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများ၏ ၈၉% သူတို့မှာအသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်းမှု ဦး ဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေမှာရှင်းလင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။
အသိအမြင်ကွာဟချက်မှသိသာထင်ရှားသောခြွင်းချက်မှာ IT လုပ်သားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်းဖြစ်သည်။ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေကဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိကြတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်အိုင်တီခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူဆွေးနွေးမှုများအတွက် Dell Luminaries Podcast တခုကိုခိုင်မာသည့်ခေါင်းဆောင်မှုကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ၀ န်ထမ်းထောင်သောင်းချီသောနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများဖြစ်သောဤအဖွဲ့အစည်းများ၏လည်ပတ်မှုယဉ်ကျေးမှုမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီလေ့လာမှုကို Nintex လေ့လာမှုကထောက်ခံပါတယ်။ အရောင်းအဖွဲ့အစည်းအတွက်အထူးသီးသန့်လေ့လာမှုက
အရောင်း၏ ၆၀ ရာနှုန်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကိုမသိရှိကြပါ
အရောင်းပညာရှင် ၄၀% သည်သူတို့၏အလုပ်၏ငါးပုံတစ်ပုံကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်
၇၄ ရာခိုင်နှုန်းက ၄ င်းတို့၏အလုပ်အချို့ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
သူတို့အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အလိုအလျောက်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်အသွင်ကူးပြောင်းရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုခေါင်းဆောင်မှုမရှိကြပါ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီလေ့လာမှုကအရောင်းကောင်းသူ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းဟာဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတောင်မှပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူး၊
ဒီကနေ့ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တောင်အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ စားသုံးသူများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြုအမူသည် ပိုမို၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့်တတ်နိုင်သောပလက်ဖောင်းများတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလုပ်ခဲ့ဖူးသောကြီးမားသောအရင်းအနှီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒီအချက်ကကျွန်တော်ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကူညီနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ ရောင်းချသူတစ် ဦး သည်အမြတ်အစွန်းများများရသည့်တိုင်ပြန်လည်ရယူရန်လပေါင်းများစွာအချိန်ယူရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရောင်းချသူမှပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းသိမ်းထားသောစီးပွားဖြစ်စနစ်တစ်ခုလိုအပ်ပြီးသူတို့၏ platform သို့စာရင်းပေးသွင်းရန်နှင့်သူတို့၏စီးပွားဖြစ်စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်၊
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏အကြံပြုချက်အရ AppleTV နှင့် HDTV များကိုစင်ပေါ်မှဖယ်ထုတ်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလျှင် ၁၄ ဒေါ်လာသာကျသင့်သည်။ Kitcast။ ကြီးမားသောအရင်းအနှီးများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်စနစ်သက်တမ်းကုန်သည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ထိုငါ့အတိုင်ပင်ခံအခကြေးငွေများအပါအဝင်!
၏ဖြစ်ရပ်ပြန်လည်သုံးသပ်၌တည်၏ Sears '' မကြာသေးမီကဒေဝါလီခံဒါကလုံးဝဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလို့ငါထင်တယ်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်းပြည်တွင်းမှလူတိုင်းသိကြသော်လည်း၎င်းကိုဖြစ်ထွန်းစေရန်ခေါင်းဆောင်မှုမရှိကြပါ။ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းတည်ငြိမ်မှုနှင့်အခြေအနေပိုများလာခဲ့ပြီးအလယ်အလတ်စီမံခန့်ခွဲမှုကပြောင်းလဲမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ ထိုကြောက်စိတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတို့သည်သူတို့၏မလွှဲမရှောင်သာနိဂုံးချုပ်သွားစေသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုကို ၀ န်ထမ်းများမလိုအပ်ဘဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သည်
စီးပွားရေး ၀ န်ထမ်းများ၏အကြောင်းပြချက်သည်အသွင်ပြောင်းရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်စုတိုမရရှိသည့်အပြင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအခြေ ပြု၍ မကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူး အသွင်ပြောင်းအားထုတ်မှုနောက်ကွယ်မှ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း၌မည်သူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းရေးအားထုတ်မှုကို ဦး ဆောင်သင့်သည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီမှုမရှိခြင်းကို Nintex ကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သူတို့၏အသိအမြင်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်စီးပွားရေး ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အသွင်ပြောင်းမှုနှင့်အလိုအလျောက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုရှုမြင်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည် အန္တရာယ် ဤကဲ့သို့သောမဟုတ်ပါသော်လည်း၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များ။ ၀ န်ထမ်းသုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးခန့်ကအသိဉာဏ်စွမ်းရည်များအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုအန္တရာယ်ပြုလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော်အလုပ်အများစုသည်အသိဉာဏ်ရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ရလဒ်ကြောင့်ကွယ်ပျောက်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းဌာနများတွင်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုအနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချပြီးဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်၊ ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါ။ သင်၏အရည်အချင်းကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးချရန်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်တီထွင်ကြံဆမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်း၏ထိပ်တန်းအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။
Download of the Intelligent Process Automation လေ့လာမှုကိုရယူပါ
ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအွန်လိုင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံ